Iindaba -Izibonelelo zokutywinwa kwe-ultrasonic
I-Ultrasonic lolunye uhlobo lomtshangatshangiso oomatshini, oqulathe inkqubo yonikezelo lwamandla kunye nenkqubo yentshukumo ye-ultrasonic. Ngumbane oguqula amandla oomatshini abasebenza rhoqo, amandla aphezulu, acinywe ngamandla okuqhuba. Kwaye iiparameter ezihambelanayo kunye neyona nto iphambili yeyona nto iphambili kubuchwephesha be-ultrasonic.
Idijithali yokubuyisela umva ngokuzenzekelayo kumvelisi we-ultrasonic → iTransducer (Veza i-ultrasound wave) → i-Ultrasonic Horn (Yandisa i-ultrasonic) → iNtloko ye-Mold (Transmit ultrasound)
Kwaye ubuhle kunye nobubi bokwenza isikhunta yinxalenye ebalulekileyo ye-ultrasonic, sizisa i-analyzer yokuthintela phambili, umhlalutyi we-mold spectrum, ngovavanyo oluchanekileyo lwamaxesha okubumba kunye nohlalutyo lomtshangatshangiso ngezixhobo. amandla e-ultrasonic.and ukunciphisa umda ongapheliyo ngenxa yokungahambelani rhoqo nomatshini, nangaphezulu, ukwandisa ubomi kumatshini kunye nokubumba.
Iipateni zokutywina ityhubhu yePlastiki, zineentlobo ezahlukeneyo zokutywina, kuyacetyiswa kuxhomekeke kwiimfuno zabathengi ezahlukeneyo.
Ukutywinwa kwe-Ultrasonic ukutywina ngaphakathi kwityhubhu kufudunyezwa kukuphambana okuhamba rhoqo okuveliswa luphondo lwe-ultrasonic. Umbhobho emva koko ubotshelelwe kwi-anvil kwaye upholile ukwenza itywina itywina.
Ultrasonic itywina ayizukulimaza umbandela ngaphakathi kwaye ukutywina kucocekile kwaye kuzinzile. Ukuba ufuna umgangatho ophezulu kunye nesiphumo sokutywinwa okuzinzileyo, uhlobo lokutywinwa kwe-ultrasonic luphakanyiswa kakhulu.
Ukuba unobubanzi beetyhubhu ezahlukeneyo, umatshini wokutywina we-ultrasonic ufuna kuphela ukutshintsha abanini beetyhubhu kwaye akukho sidingo sokutshintsha iinxalenye zangaphambili, indleko kunye nexesha elifunekayo lingaphantsi kakhulu.
Okwangoku, kuba ukutywina kwe-ultrasonic kuyitywina elibandayo, awudingi chiller yemizi-mveliso ukuze usebenze nayo. Ukugcina zombini indawo yomgangatho kunye netyala lombane.
Ke wamkelekile ukuba uqhagamshelane noMatshini we-HX ngoku, umthengisi omnye wokumisa umatshini wokupakisha kwaye masikuncede!
Ixesha lokuposa: Aug-07-2020